समाचार - किन Bitcoin यति महँगो छ? Bitcoin विनिमय के हो?
सन्‌ १ 1661१ मा स्विडेनले पहिलो युरोपेली नोटहरू जारी गर्नु भन्दा years०० वर्ष अघि चीनले तामाको सिक्का बोक्ने बोझलाई कसरी कम गर्ने भनेर अध्ययन गर्न थालिसकेको थियो। यी सिक्काहरूले जीवन कठिन बनाउँदछ: यो भारी हो र यसले यात्रा खतरनाक बनाउँछ। पछि, व्यापारीहरूले एक अर्कामा यी सिक्का जम्मा गर्ने र सिक्काको मूल्यको आधारमा कागज प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरे।
निजी निकायले मुद्रास्फीति र मुद्रा अवमूल्यनको वृद्धिलाई उकास्न दियो: सरकारले सुनको भण्डार द्वारा समर्थित आफ्नै बैंक नोट जारी गर्‍यो, जसले विश्वको पहिलो कानुनी टेंडर बनायो।
विगत केही शताब्दीमा, देशहरूले निश्चित सुनको चाँदीको सिक्कामा सुन र चाँदी जस्ता वस्तुहरूको प्रयोग गरेर "सुनको मानक" अपनाउन थाले। र यो सिक्कासँग छेडछाड नभएसम्म एक निश्चित मान प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले प्रतिनिधि मुद्राको वृद्धिलाई निम्त्याउँछ।
बैंकहरूले "गोल्डन बन्ड" जारी गर्दछ, त्यो हो, अमेरिकी डलर face० को अनुहार मूल्य भएको बैंक नोटहरू स्वर्णमा अमेरिकी डलर for for० मा विनिमय गर्न सकिन्छ।
१ 194 .4 मा ब्रेटन वुड्स प्रणालीले निर्णय गरे कि बैठकमा उपस्थित हुने countries countries देशले आफ्नो मुद्रालाई अमेरिकी डलरमा राख्नेछन् किनभने अमेरिकी डलर सुन भण्डार द्वारा समर्थित छ। यसको वास्तविक अर्थ यो हो कि अमेरिकी डलर कुनै पनि समयमा सुनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
यसको वास्तविक अर्थ यो हो कि अमेरिकी डलर कुनै पनि समयमा सुनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
प्रभाव राम्रो छ, तर अवधि लामो छैन। बढ्दो सार्वजनिक debtण, मुद्रा मुद्रास्फीति, र भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक वृद्धिको मतलब अमेरिकी डलर बढी दबाबमा छ। यसको उत्तरमा केही युरोपेली देशहरू पनि प्रणालीबाट पछि हटे र सुनका लागि अमेरिकी डलर साटासाट गरे। त्यस समयमा तिनीहरूको भण्डारमा सुन भन्दा बढी डलर थियो।
सन् १ 1971 .१ मा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले सुनौलो विन्डो बन्द गरे र यस अवस्थालाई परिवर्तन गरे। विदेशी सरकारहरू धेरै डलर राख्छन्, र संयुक्त राज्य अमेरिका सुन को अभाव हो। १ 15 अन्य सल्लाहकारहरूसँग मिलेर उनीहरूले मुद्रास्फीतिबाट जोगिन, बेरोजगारी घटाउन र अमेरिकी डलरलाई कानुनी टेन्डरमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ आर्थिक योजनाको घोषणा गरे जुन मुख्यतया वस्तु र मापदण्डको सट्टा मुद्रा प्रयोगकर्ताहरूको सहमतिमा निर्भर थियो।
तसर्थ, आशा यो हो कि सबै पार्टीहरूले तपाईंको मुद्रा स्वीकार गर्दछन्, जुन पूर्ण रूपमा विश्वासमा आधारित छ।
बिटकॉइनको लागि पनि त्यहि हो, यो क्रिप्टोकरन्सी एक पटक $ १,, .783.०6 को रेकर्ड उच्च हिट भयो। Bitcoin मानले के दिन्छ? यो आपूर्ति र माग मार्फत प्राप्त भएको दाबी सबै परिस्थितिहरु लाई कभर लाग्दैन। यसको कुनै आधार छैन र कोहीले पनि नियन्त्रण गर्दैन।
कम से कम, तपाईं एक मुद्राको मूल्य कायम गर्न कानूनी व्यवस्थापन एजेन्सीमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।
बिटकॉइनसँग कानूनी मुद्राको विशेषताहरू छन्। जहाँसम्म, एक शासन दृष्टिकोणबाट, कसैले पनि Bitcoin "स्वामित्व पाउदैन"। यो फिएट नगदको रूपमा उस्तै तरिकाले कार्य गर्दछ जस्तो देखिन्छ, तर अनिवार्य रूपमा फरक इकोसिस्टमले अर्थशास्त्रीहरू र वित्तीय विज्ञहरूलाई सोच्न लगाउँछ: यसको मूल्य कसले तय गर्छ?
तपाईले के देख्नुहुन्छ बिटकॉइनमा लाखौं लाइनहरूको लाइनहरू। बिटकॉइन वास्तवमा केही हजार लाइनहरूको कोड थियो जुन सतोशी नाकामोटोले २०० 2008 मा विकसित गरेको थियो र २०० earlyको सुरूमा जारी गरियो। प्रख्यात सेतो कागजमा "बिटकॉइन: ए पियर-टु-पियर इलेक्ट्रोनिक क्यास सिस्टम" (बिटकइन: ए पियर-टु-पियर) इलेक्ट्रोनिक नगद प्रणाली), Bitcoin को अवधारणा विस्तृत छ।
उसको मूल विचार भनेको नगदको एक प्रकारको सिर्जना गर्नु हो जुन वित्तीय संस्थामा जानुपर्दैन किनकि यो ईन्क्रिप्टेड छ।
सबैभन्दा ठूलो नवीनता ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अनुप्रयोग हो। प्रत्येक ब्लक Bitcoin नेटवर्क मा एक लेनदेन प्रतिनिधित्व गर्दछ - अधिक ब्लॉक, अधिक लेनदेन लामो हुन्छ। तसर्थ, यसले एक "चेन" गठन गर्‍यो, त्यसैले यसको नाम।
ब्लक उत्पादन गर्नका लागि, खानीहरूले ए र बी बीच X मान र वाई समय लेनदेनको अस्तित्व प्रमाणित गर्न मूल कम्प्युटर प्रशोधन शक्ति र ठूलो मात्रामा बिजुली प्रयोग गर्नु पर्छ जब यो पुष्टि हुन्छ, ब्लक देखा पर्दछ र लेनदेन पास हुन्छ। । खनिकहरूले बिटकइनलाई इनामको रूपमा प्राप्त गरे।
यद्यपि यो डिजिटल मुद्राको कुनै आन्तरिक मूल्य छैन-यसलाई वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्न सकिदैन। व्यक्ति जो बिटकॉइनको आशंकित हुन्छन् अक्सर भन्छन् कि बिटकॉइन बाँच्नका लागि, यसलाई पहिला स्वीकार्नुपर्नेछ र अन्य वस्तुहरूको लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ। बिस्तारै, समयसँगै, यो पैसा हुनेछ। उदाहरण को लागी, किनभने सुन गहनाहरु र इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनहरु मा प्रयोग गरीन्छ, मान्छेले यसको मूल्य जोगाउन सुन होर्डिंग गर्छन्।
अस्ट्रियाका अर्थशास्त्री कार्ल मेन्जरले गरेको दूरगामी काममा उनले मुद्रालाई "केही वस्तुहरू सामान्यतया साटासाट गर्ने विनिमयको माध्यम भएको भन्ने तथ्यको रूपमा वर्णन गर्न थाले।" मेन्जरको आधारमा लुडविग भोन माइजेस पनि एक अर्थशास्त्री हुन्। उनले कमोडिटी मुद्रालाई मुद्राको रूपमा वर्गीकृत गर्‍यो जुन “एक वाणिज्य वस्तु पनि हो।” कानूनी टेंडर मुद्रा हो जुन "विशेष कानूनी योग्यता भएको वस्तुहरू" बाट बनेको हुन्छ।
"... विशेष कानुनी योग्यता सहितको चीजहरू सहित नाममूलक मुद्रा," "- लुडविग भोन माइज थ्योरी अफ मनी एंड क्रेडिट
ईन्स्टर्न्सिक मूल्यको विचार मानिसहरुमा गहिरो निहित छ, र अरस्तुले पनि एक पटक पैसा किन किन आन्तरिक मूल्य चाहिन्छ भनेर लेखेका थिए। संक्षेपमा भन्नु पर्दैन, यो के मुद्रा हो, यसको मूल्य यसको आफ्नै उपयोगिताबाट आउँदछ। ईतिहासले प्रमाणित गर्छ कि मुद्रा बन्नको लागि कुनै चीजलाई मूल्य मानको आवश्यक पर्दैन, अरस्तुको तर्क असक्षम छ।
अफ्रिका र उत्तरी अमेरिकाका केही भागहरूमा, सिसाका मोतीहरू मुद्राको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यद्यपि तिनीहरू वस्तुको रूपमा थोरै प्रयोगका रूपमा प्रमाणित भएका छन्। प्रशान्त महासागरका यापका मानिसहरूले पैसाको रूपमा चूना ढु .्गा प्रयोग गर्छन्।
व्यक्ति जो बिटकॉइनको सन्देह छन् प्रायः विकिपोइनको व्यवहारिकताको निन्दा गर्न आन्तरिक मूल्य आर्गुमेन्टहरू प्रयोग गर्छन्। दुर्भाग्यवस, Bitcoin एक विशुद्ध डिजिटल अस्तित्व हो, त्यसैले यो वास्तविक संसारको शेलहरु बाट मुक्त छ। यसमा सुन जस्ता आन्तरिक मूल्य हुन आवश्यक छैन, न त यसलाई कानूनी टेन्डर बनाउनको लागि अरुले विशेष अधिकार प्रदान गर्नु आवश्यक छ। यद्यपि यो स्पष्टीकरण जस्तो देखिन्छ - बिटकॉइन एउटा ब्रान्ड नयाँ इकाई हो जुन हाम्रो मानवीय नियमहरूको अधीनमा छैन-तर अझै यसको पूर्ण अर्थ छैन।
यसलाई यस तरिकाले सोच्नुहोस्: बिटकइन र फ्याट मुद्राहरू फरक वित्तीय इकोसिस्टमहरू हुन्।
फिएट मुद्रा भौतिक संसारसँग सम्बन्धित छ, जसले अन्य मुद्रा प्रतिबन्धहरू ल्याउँछ। पावर तिनीहरूसँग हुन्छन् जसले मुद्रा नियन्त्रण गर्छन्, र केन्द्रीय बैंकले सँधै मुद्रास्फीति र सर्कुलेट बढाउन अधिक पैसा प्रिन्ट गर्न सक्दछ। यद्यपि, कसैले पनि तपाईंलाई ठ्याक्कै भन्न सक्दैन कि विश्वमा कति डलर डलर बगिरहेको छ।
सुनको आपूर्ति सीमित छ, तर यसले मुद्रास्फीतिबाट प्रभावित हुनेछ। यदि कसैलाई हालको आपूर्ति बाहिर सुनको ठूलो मात्रा भेट्टाउनुभयो भने, स्वामित्व पूर्ण रूपमा पातलो हुन सक्छ। सामग्री विज्ञानका आविष्कारहरूले पनि इलेक्ट्रोनिक्स र उपभोक्ता उत्पादनहरूमा सुनको प्रयोगलाई कम गर्न सक्छ।
Bitcoin को डिजिटल प्रकृति एक नयाँ सैद्धान्तिक आधार को आवश्यकता छ। अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयसम्म बहुमूल्य धातु र फिएट मुद्राको सीमिततालाई मान्यता दिएका छन्। त्यसकारण, बिटकॉइनको परिचयले नियमहरूको नयाँ सेटलाई जन्म दियो, जसलाई धेरै मानिसहरूले "अपस्टार्ट वित्तीय इकोसिस्टम" भनेका छन्।
समस्या यो हो कि बिटकॉइन म्याक्सिमाइजरहरूले भनेको छ, कानूनी मुद्रा र क्रिप्टोकुरेन्सी इकोसिस्टमहरू वास्तवमै एकसाथ रहन सक्दैन। किनकि त्यहाँ वित्तीय साधन, लगानी उत्पादन वा धितोको रूपमा कुनै आन्तरिक मूल्य छैन, सबैभन्दा ठूलो शर्त बिटकइनलाई विश्वव्यापी मुद्रा बनाउनु हो।
आज, विश्वव्यापी पैसा आपूर्ति (M1) .6..6 ट्रिलियन अमेरिकी डलर हो। यदि तपाईं चेक निक्षेप, छोटो अवधि का ondsण, समय रकम र अन्य वित्तीय साधनहरू थप्नुभयो भने, यो आश्चर्यजनक $ 90 ट्रिलियनमा पुग्नेछ। विश्वव्यापी मुद्रा बन्नको लागि, बिटकॉइनसँग कम्तिमा विश्वव्यापी पैसा आपूर्तिको मूल्य हुनु पर्छ - तर यो त्यस्तो छैन, किनकि विक्टकोइनको बजार मूल्य लेख्ने समयमा १ the० अरब मात्र हो।
यद्यपि द्रुत रूपमा बृद्धि भइरहेको सार्वभौम debtण र विदेशी debtणले लगानीकर्ताहरूलाई पुनर्निवेश हेजिंग उपकरण खोज्न सुरु गर्न सक्छ जुन सुन लिन सजिलो छ र सुनभन्दा बढी बदल्न सकिने उपकरण हो। यसले Bitcoin को मूल्या valu्कन बढावा गर्न सक्छ किनकि यसको मूल्य स्टोर प्रकार्य छ। मुद्रास्फीतिसँग लड्न, धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो डलरमा डलर, यूरो वा येन राख्ने सामग्रीमा छन्-अर्जेन्टिना र भेनेजुएलाहरूले यो गर्छन्, उनीहरू तुलनात्मक रूपमा स्थिर डलर राख्छन्।
यसले व्यावहारिक मूल्य ल्याउन सक्दछ: बिटकॉइन मूल्यको स्टोरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हामी यसलाई एक सम्पत्तिको रूपमा देख्छौं। यदि यो हो भने, त्यसो भए बिटक्वाइन अनिवार्य रूपमा एक मुद्रा स्फीति मुद्रा हो। नेटवर्क बृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न प्रत्येक चोटि ब्लकचेनमा नयाँ ब्लक सिर्जना भएपछि new० नयाँ बिटकोइनहरू उत्पन्न हुन्छन्। प्रत्येक २१०,००० वर्ग पछि, इनाम आधा हुनेछ (अब प्रति वर्ग १२..5 पुरस्कार, र मे १,, २०२० मा 6.२5 मा आधा हुनेछ)। अन्तर्निहित अभाव र २१ मिलियन बिटकोइन्सको आपूर्ति टोपीसँग जोडिएमा, यो कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन कि मानिस र वित्तीय संस्थाले बिटकॉइनलाई कडा मुद्राको रूपमा व्यवहार गर्न सक्दछन् (यसलाई एक सुरक्षित-सुरक्षित मुद्रा पनि भनिन्छ)।
यसको मतलब यो हो कि आन्तरिक मौद्रिक नीतिले बिटकॉइनको क्रयशक्ति चलाउँदैछ - तर यसको मूल्यलाई के निर्धारण गर्छ?
यदि तपाईं अर्थशास्त्रको क्लासिक स्कूलमा हेर्नुभयो भने, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि बिटकॉइनको मूल्य यसको उत्पादन लागतबाट निर्धारित गरिन्छ। यसको मतलब हार्डवेयर र बिजुली हो। बिटकोइनले डिफ्लेसनबाट ग्रस्त रहन थालेपछि खनिजहरूको संख्या बिस्तारै घट्ने छ उच्च खानी लागतका कारण। यद्यपि, त्यहाँ केही खानीहरू छन् जसले घाटामा बिटकॉइन बेच्न इच्छुक छन्, जसले भविष्यमा कसैले बिटकइनको वृद्धिलाई हेज गरिरहेको संकेत दिन सक्छ: मूल्य पूर्ण रूपमा उत्पादन लागतमा निर्भर हुँदैन, यद्यपि यो एक कारक हो।
अर्थशास्त्रको नियोक्लासिकल स्कूल यस सिद्धान्तमा विस्तार भएको छ र अर्को उद्देश्य कारक थपिएको छ: आपूर्ति र माग। बिटकइनको आपूर्ति बन्द भएदेखि, खनिएको बिटकोइनहरूको स also्ख्या पनि घट्दै जानेछ, त्यसैले धेरै बिटकोइनहरूको माग बढ्न सक्छ। अधिक माग उच्च मूल्य बराबर छ।
केवल उद्देश्य कारकहरूमा भर पर्नु भनेको पूरै तस्विर चित्रण गर्न सक्षम देखिदैन। यदि उत्पादन लागत मुख्य कारण हो भने, तब बिटकॉइनको मान अमेरिकी व्यापक पैसा आपूर्ति (M3) को नजिक हुनुपर्दछ।
यसको बावजुद, खानीहरु बिटकइनको उच्च लागतको बावजुद, घाटामा छन्।
यदि माग र आपूर्ति को सन्तुलन महत्वपूर्ण छ, तब Bitcoin को स्पष्ट, लेखा परीक्षित आपूर्ति एक स्थिर मांग निर्धारित गर्नु पर्छ। यद्यपि, Bitcoin अझै चरम अस्थिरताको खतरामा छ र एकै दिनमा पतन र उडान हुन सक्छ।
अर्थशास्त्रको अस्ट्रिया स्कूलमा प्रवेश, Bitcoin समर्थकहरूलाई यो स्कूल धेरै मनपर्दछ। अस्ट्रियाका अर्थशास्त्रीहरू विश्वास गर्छन् कि कुनै पनि चीजको मूल्य व्यक्तिगत कारकबाट निर्धारण हुन्छ, उत्पादन लागत समेत। आपूर्ति र माग व्यक्तिगत प्राथमिकता द्वारा निर्धारित गरिन्छ। तसर्थ, यसले Bitcoin — को मानको कथित मानको व्याख्या गर्न सक्दछ र व्यक्तिपरक कारकहरू बढी महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हुन सक्छन्।
यो देख्न सकिन्छ कि त्यहाँ cryptocurrency (वा पनि मुद्रा) मूल्यवान छ को लागी कुनै स्पष्ट व्याख्या छैन। यस अवस्थामा, बिटकॉइनको मूल्य क्लासिक आर्थिक मोडेल, बजार भावना र आन्तरिक मौद्रिक नीति द्वारा संचालित देखिन्छ।
जहाँसम्म, जे भए पनि आर्थिक सिद्धान्त मानिसहरूले अपनाउने कुरा, cryptocurrency अझै पनि एक वित्तीय क्रान्ति शुरू हुनेछ। यदि यो वैश्विक मुद्राको अर्को रूपमा विकसित हुन सक्दछ भने, विश्वव्यापी वित्तीय इकोसिस्टम पल्टिनेछ (यो राम्रो होस् वा खराब, हामीलाई थाहा छैन)।
अन्तमा, Bitcoin वित्तीय प्रयोगहरूको लागि प्रक्षेपण प्याड हो। २०१ 2016 देखि २०१ From सम्म, ब्लकचेन टेक्नोलोजीले क्रिप्टोकरन्सीको समृद्धिलाई नेतृत्व गर्‍यो र ब्लकचेन नवीनताको पूरै नयाँ संसार ल्यायो। आज, हामी एक डलरको मूल्य कायम राख्नको लागि स्थिर क्रिप्टो मुद्राको अध्ययन गर्न सम्पत्ति खम्बा र आरक्षित बैंकहरूको अवधारणा प्रयोग गर्नेछौं।
Bitcoin लाई मुद्राको रूपमा व्यवहार गर्नुको सट्टा यसलाई भुक्तानी प्रणालीको रूपमा व्यवहार गर्नु राम्रो हुन्छ।
त्यसकारण, Bitcoin को सहि त्यसको नेटवर्कमा छ। अधिक मानिसहरु सम्मिलित छन्, राम्रो छ। अनिवार्य रूपमा, यसको मतलब Bitcoin को मानमा यसको स्वामित्व कसमा छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। आजकल, बिटकॉइनको लोकप्रियताका साथ (दैनिक प्रयोगको लागि होईन, तर लगानी र व्यापारको लागि), अधिक र अधिक जिज्ञासु मानिसहरूले यस नयाँ प्रविधिमा ध्यान दिन थालेका छन्। यसको मतलब अधिक वितरण हो।
यद्यपि, बिटकॉइनले वास्तवमा अपेक्षित रूपमा सञ्चालनका लागि, यसलाई प्रुफ-अफ-स्टेक (पोअस) प्रणालीमा स्विच गरेर खानीदारहरू र खानी पोखरीहरूबाट छुटकारा पाउन आवश्यक छ। Bitcoin को प्रूफ-वर्क सिस्टमले लेनदेनलाई अत्यन्त महँगो बनाउँदछ - खानीमा काम गर्नेहरूले बिजुली र कच्चा कम्प्युटर प्रशोधन शक्तिसँग नेटवर्कमा बिटकइन लेनदेन प्रमाणित गर्न लाखौं डलर खर्च गर्छन्। PoS प्रणालीको साथ, Bitcoin यसको नेटवर्कको कारण मूल्यवान हुनेछ। अधिकांश सरोकारवालाहरु आफ्नो होल्डिंग को एक हिस्सा छोड्नेछ नेटवर्क वृद्धि गर्न को लागी, जसले गर्दा उनीहरुको होल्डिंग आनुपातिक रुपमा बढ्छ।
यो सरल देखिन्छ, तर प्राय जसो बिटकोइनहरू चिनियाँ खानीहरूले खानी गरेका छन्। यदि यो (उदाहरणका लागि) अमेरिकी व्यापक पैसा आपूर्तिलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ भने, अमेरिकी सरकारले किन विश्वशक्ति खनिजहरूको विरोध गरेर नियन्त्रणमा राखी विश्वव्यापी मुद्रा अपनाउँछ?
यदि महाशक्तिहरू इच्छुक छैनन् भने साना क cong्ग्रेसनहरू किन अनुसरण गर्छन्? विश्वव्यापी मौद्रिक लक्ष्य पाइप सपना जस्तो देखिन्छ, तर अन्त्यमा, बिटकइनले काम गर्न सक्दछ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर गर्दछ कि कसले सुन्नुभयो, जहाँ यसको मूल्य हुन्छ।
बीटीसी कन्टेनर, बिटमेन कन्टेनर, क्रिप्टो खनन asic, क्रिप्टो खनन उपकरण प्रयोग, antminer कन्टेनर, एन्टबक्स कन्टेनर,